Semalt: Ahoana ny fomba hanakanana cookies any amin'ny tranonkala rehetra ivelan'ny tranonkalanao manokana
Ny ankamaroan'ny tranonkala dia mampiasa cookies mba hanamafisana ny asany fanaraha-maso. Amin'ny tranga hafa, manampy cookie ny olona mba hanana traikefa amin'ny Internet. Ohatra, ny tranonkalan'ny fandoavam-bola dia mampiasa cookies mba hiarovana ny mpanjifany amin'ireo mpanao heloka bevava cyber izay manala ny tenimiafiny. Raha toa ny cookies dia toa manao fanandramana mivelatra kokoa, dia misy ihany koa tranga hafa raha te hanafoana cookies amin'ny browser ianao.
Ao amin'ity lahatsoratra SEO ity, i Jack Miller, manam-pahaizana manokana Semalt , dia hampianatra anao ny fomba hanakanana cookies amin'ny browser. Ho fantatrao koa ny fomba hanalàna ireo tranonkala izay tianao hampiasana ny cookies miasa.
Nahoana ianao no te hanakana cookies
Cookie dia rakitra (minimal) izay tranokalan'ny tranonkala eo amin'ny ordinateranao mba hanatsarana ny traikefa azonao. Ity rakitra ity dia mitahiry ny mombamomba an'ity tranokala ity ary manampy anao amin'ny fampiasanao manaraka. Ohatra, ireo tranokala dia afaka mitahiry ny fampahalalana eto toy ny zavatra ao anaty sarety iray, mijery ny fotoam-pivoriana, ary ny fahazaran-dresaka. Ireo tahirin-kevitra ireo dia manintona ary manavao ny fampahalalany. Toy izany koa, ireo mpampihorohoro ratsy dia afaka mampiasa io endri-javatra io hanatanterahana ny fanafihana sasany. Ohatra, ny olona dia nanakorontana hackers hanaraka ny fampiasana ny tranonkalany tsy misy ny fahalalany. Amin'ny toe-javatra hafa, ny olona dia mety te-hametra ny fampahalalam-baovao mety ho tian'ny antoko fahatelo hanangonana azy ireo amin'ireto sy ohatra maro hafa, ny fianarana ny fanakanana cookies dia mety ilaina mba hampifanarahana ny fahazarana mijery anao.
Amin'ity fitarihana ity, dia hampiasa tranonkala maromaro izahay mba hampiseho io fomba fanao io. Ireto browsers ireto dia Firefox, Chrome ary Internet Explorer. Amin'ireo tranga ireo dia misy fomba voajanahary manaiky sy misoroka cookies..Zava-dehibe ny manamarika fa ity fomba ity dia azo ampiharina amin'ireo browsers hafa. Ny hany fahasamihafana dia ny fizotry ny toe-javatra amin'ny programim-pifanarahana. Aza mieritreritra ny fomba fiasanao ampiasainao.
Ao amin'ity tranokala ity dia azo atao ny mifehy ny cookies ho an'ireo tranonkala mitsidika anao. Raha te hanakana cookies dia tsindrio ny fikandrana (Gear) icon. Afaka miditra amin'ny dikan-teny]> Fidirana Internet> Privacy> Sites. Hatramin'io fotoana io, azonao atao ny mametraka ny sehatra miafina ao amin'ny tranonkala. Tsindrio ny fandrosoana ary jereo ny bokotra fanontam-bidy raha tsy te-hanohy hampiditra ireo toerana maro ianao.
Ireto misy fanaraha-maso matanjaka amin'ny fanaraha-maso toy ny cookies. Mandehana any amin'ny safidy toy izany ny tsiambaratelo. Eo amin'ny fiainana an-tsipiriany, dia mihena ny sakafo. Tsindrio ny manaiky na tsy mamela cookies hamorona tranonkala eto. Azonao atao koa ny mametraka fitondran-tsakafo cookie amin'ny navigateur Firefox anao.
Ao Chrome dia afaka miditra amin'ny fikandrana ianao ary tsindrio ny safidinao. Ao amin'ny lisitra misongadina, azonao atao ny manindry ny fanovana ao amin'ny votoaty ary mankany amin'ny sehatra "cookies". Tahaka ireo browsers hafa, afaka mifehy ny kitay avy amin'ity fizarana ity ianao.
Misy fiantraikany ny fanaraha-mason'ny cookies. Ohatra, ny tambajotran'ny dokambarotra dia tsy afaka manome anao ny doka mifanaraka aminy. Amin'ny toe-javatra hafa dia manaparitaka popups sy dokam-barotra eo anelanelan'ny pejy ianao. Tena ilaina ny mijery ny manam-pahaizana IT raha tsy fantatrao izay ataonao. Misy ny tranga izay ahitan'ny olona ny volan'ny kaonty PayPal nanampy tamin'ny fanovana ny cookies Source .